Arovy aho amin'ny mpandimby, ny Fiangonan'Andriamanitra An'izao tontolo izao Switzerland (WKG)
«Izay mandray anao dia mandray ahy; ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray marina satria olo-marina dia hahazo ny valisoan'ny marina (Matio 10, 40-41 fandikana Schlachter).
Ny vondrom-pinoana izay miahy ahy (Tombontsoa ho ahy ity) ary izaho tenany dia nandia fiovana lehibe tamin'ny finoana sy ny fampiharana an'io finoana io nandritra ny roa taona lasa. Voafatotry ny lalàna ara-dalàna ny fiangonantsika ary maika ny hanaiky ny filazantsaran'ny fahasoavana. Tsapako fa tsy ny rehetra no afaka mandray ireo fanovana ireo ary ny sasany dia mety hanelingelina azy.
Saingy ny tsy nampoizina dia ny fankahalana nitazona ahy manokana. Ny olona miantso ny tenany ho kristiana dia tsy naneho ny Kristianisma be dia be. Ny sasany dia nanoratra tamiko fa hivavaka ho faty aho. Ny hafa kosa nilaza tamiko fa te handray anjara amin'ny famonoana ahy izy ireo. Nanome ahy fahatakarana lalindalina kokoa izany rehefa nilaza i Jesosy fa na iza na iza te hamono anao dia hieritreritra fa manompo an'Andriamanitra ianao (Jaona 16,2).
Nanandrana ny zava-drehetra aho mba tsy hahasambatra ahy io onjam-pankahalana io fa mazava ho azy fa tsy azo ihodivirana. Mandratra ny teny, indrindra fa avy amin'ireo namana sy mpiara-miasa taloha taminy.
Nandritra ny taona maro izay, ny teny tsy mitsahatra tezitra sy ny mailaka fankahalana dia tsy nahavoa ahy tahaka ny voalohany. Tsy hoe lasa henjana kokoa, matevina ny hoditra, na tsy miraharaha ny fanafihan'ny olona manokana aho, fa kosa hitako fa ireo olona ireo dia mampijaly ny tenany amin'ny fahatsapana fahatsapana ambany, ahiahy ary fahamelohana. Ireo dia vokatry ny fanarahan-dalàna eto amintsika. Ny fankatoavana tanteraka ny lalàna dia toy ny lamba firakotra fiarovana, tsy ampy tsy voafehy ao anatin'ny tahotra.
Rehefa miatrika ny tena fiarovana ny filazantsaran'ny fahasoavana isika dia misy manipy ny lamba firakotra taloha, fa ny hafa kosa mikiry mafy azy io ary mametaka ny tenany bebe kokoa. Izy ireo dia mahita izay te-hanala azy ireo ho fahavalo. Izany no antony nahatonga ny Farisiana sy ny mpitondra ara-pivavahana hafa tamin'ny fotoana nahitan'i Jesosy azy ho fandrahonana ho an'ny filaminany ary noho izany dia te hamono azy amin'ny famoizam-po.
Tsy nankahala ny Fariseo i Jesosy, tia azy ireo ary te hanampy azy ireo satria fantany fa ny fahavalony no tena fahavalony indrindra. Toy izany koa ankehitriny, ny fankahalana sy ny fandrahonana dia avy amin'ny lazaina ho mpanara-dia an'i Jesosy ihany.
Milaza amintsika ny Baiboly fa "ny tahotra tsy amin'ny fitiavana". Mifanohitra amin'izany, ny "fitiavana tonga lafatra dia mandroaka ny tahotra" (1 Jaona 4,18). Tsy ny tahotra rehetra no manafaka ny fitiavana. Rehefa tsaroako izany rehetra izany, dia tsy manelingelina ahy intsony ny fanafihan'ny tena manokana. Tiako ireo mankahala ahy satria tia azy ireo i Jesosy, na dia tsy fantatr'izy ireo tanteraka aza ny maha-dynamie ny fitiavany. Manampy ahy ny haka zavatra somary milamina kokoa.
Ry Ray be indrafo, mangataka ny famindramponao amin'izay rehetra mbola miady amin'ny fihetseham-pony, izay manohitra ny fitiavana ny hafa. Manontany aminao tamim-panetren-tena izahay: Misaora azy ireo ry Dada, miaraka amin'ny fanomezana ny fibebahana sy ny fanavaozana nomenao anay. Mangataka izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy, Amena
Zon'ny mpamorona © 2020 | NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA (SWITZERLAND) | CONTACTS | LEGAL NOTES | Fitsipika | MAIL